Top 5 Free Online Photo Editors u ayeey Photos Online
> Resource > Free > Top 5 Free Online Photo Editors - Tools Online Photo Faalladaada
Photo tafatirka waa mid xiiso leh oo uu noqday qayb ka mid ah dadka nolosha la caanka ah ee kaamirooyinka. Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad wax ka bedel image laakiin ma tafatirka software sawir la geliyo ee your computer. Wakhtigan, waxaad u tagi kartaa in qaar ka mid ah sawir tifaftirayaasha online, kuwaas oo aad u habboon in la isticmaalo.
Waxaa jira qaar ka mid weyn sawir tifaftirayaasha online lacag la'aan ah waa in si sahlan loo isticmaali. Waxaa loo baahan yahay No waayo-aragnimo ee tafatirka sawir xirfadle. Waxaa kaliya way fududahay in la soo sawiro aad u heerka ku xiga oo soo jiidan kara dadweynaha!
Halkan waxa ku jira ugu fiican 5 sawir tifaftirayaasha online lacag la'aan ah si aad u xaalkaa photos aad online fudayd.
Free sawir online editor 1: Adobe PhotoShop Express
Adobe ee online tafatirka image qalab yahay image codsiga tafatirka Flash ku salaysan u isticmaala inay xaalkaa photos on blogs iyo baraha bulshada. Users si fudud u samayn kartaa sawiro eegi fiican iyo iyaga wadaagaan iyada oo meelo internetka iyo goobaha la wadaago sawir. Muuqaalada Great of this online tafatirka sawir qalab lacag la'aan ah waxaa ka mid ah aalad touchup, diiradda jilicsan, awoodaha madow iyo caddaan, Yeeelid ee la rajeenayo iyo saamaynta, meel lagu kaydiyo, saamayn sawir, albums, iyo 3D meelo online, iwm
Free sawir online editor 2: Phixr
Phixr waa editor sawir sahlan in la isticmaalo internetka la interface ah oo la mid ah Microsoft Rinjiga. Sidaa daraadeed, aad resize kara sawirada, dalban saamaynta kala duwan, ku qas images badan, iwm Waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaan gelin iyo aad u hesho xisaabta lacag la'aan ah in loo isticmaalo muddo dheer. Haddii kale, waxaa jiri doona xad markii isticmaalka.
Free sawir online editor 3: Picnik
Picnik waa editor weyn oo lacag la'aan ah online sawir oo waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan. Just geliyaan sawiro aad iyo raac interface ku dareen in xaalkaa photos aad. Oodles ee saamaynta sawir, noocyada qoraalka, qaababka, loox sawir, iwm waxaa la siiyaa. Version A premium oo leh waxyaabo badan oo horumarsan waxaa lagu bixiyaa kharashka ah oo dhan $ 25 sano ah.
Free sawir online editor 4: FotoFlexer
FotoFlexer kuu ogolaanayaa inaad doorato sawiro ka your computer ama qaar ka mid ah baraha bulshada sida Facebook, Flickr, MySpace, iwm Falanqeynta Real-time ah isbedel tafatir ah ayaa diyaar u ah isbedel fiican wax badala. Qalab kasta waa hal click iska! Waxa kaliya si fudud oo xiiso leh si ay u abuuraan saamaynta sawir la dhalaalayay oo lacag la'aan ah loo siiyaa biraawsarkaaga.
Free editor sawir online 5: flauntR
The editor sawir online FlauntR la shaqeeyaa noocyo kala duwan oo baraha bulshada iyo u baahan yahay diiwaangelinta. Waxay bixisaa qaar ka mid ah barnaamijyada kala duwan si aad u codsato saamaynta kala duwan si ay sawiro sida tafatirka image, Attam, embellishments, iwm Tusaale ahaan, la StylR aad, waxaad ku dari kartaa jir ah iyo Kiinteistö. Ka dib markii tafatirka, waxaad samayn kartaa gallery iyo dhoofin sawiro si ay gacanta sawiro leh muuqaal samaynaysaa / model search engine. Ka sokow, haddii aad rabto in aad daabacdo sawirada baxay, oo aad si toos ah u tegi kartaa dukaanka dhisay-in si aad u dalbato daabacayaa, boodhadhka, kaararka, iwm